Miss Universe NC ပွဲကအပြန် အပျော်တမ်းကာစီနိုဆော့ရာမှ ဒေါ်လာတွေအများကြီး အနိုင်ရလို့ ပျော်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် – Shwe Nay Chi
Miss Universe NC ပွဲကအပြန် အပျော်တမ်းကာစီနိုဆော့ရာမှ ဒေါ်လာတွေအများကြီး အနိုင်ရလို့ ပျော်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
Miss Universe Myanmar သူဇာဝင့်လွင်ရဲ့ အ ခက်အခဲတွေအတွက် အစွမ်းကုန်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်ဟာ Miss Universe ပွဲက အားပေးပြီးအပြန်မှာ အပျေ ာ်တမ်းကာစီနိုဝင်ဆော့ရာ ဒေါ်လာ 800 အနိုင်ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီငွေပမာဏဟာ အရမ်းမများသော်လည်း မနည်းတဲ့ပမာဏတစ်ခုပါပဲ။ အပျော်ခရီးထွက်တုန်း သုံးတဲ့ငွေတွေအားလုံးပြန်ရတာကြောင့် ခရီးကိုအလကားထွက်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ သူတစ် ပါးကိုစေတနာထားလို့ ကိုယ့်ရဲ့စေတနာ အကျိုးက ချက်ချင်းကိုအကျိုးပေးတယ်လို့ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေက မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။
ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ ပထမဆုံးပွဲမှာတင်ပဲအခုလိုရခဲ့လို့ အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီး ဆက်မဆော့ဘဲ ရပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ မိုင်ယာမီမှာပျော်ပျော်ကြီးလည်လို့ရသွားတာမို့ အပျော်ပေါ် အပျော်ဆင့်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးပါပဲ။
အပျော်တမ်းဝင်ဆော့ခဲ့ပေမယ့် မထင်မှတ်ဘဲ ဒေါ်လာတွေနိုင်သွားလို့ ပျော်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကို ” Casino paid for my vacation. Lol ? Miss Universe NC ပွဲ ကြည့်အပြီး casino ခဏဆော့မယ်ဆိုပြီး ထိုင်ထိုင်ချင်းပဲ စက်ထဲ $60 ထည့်လိုက်တာ $860 ရတယ်.. $800 နိုင်တယ်.. ပြန်ပြီလေ.. ဆက်မဆော့တော့ဘူး.. Miss Myan mar ကိုလဲ အားပေးရတယ်.. Miami မှာလဲ ကဲရတယ်.. ကုန်ကျစရိတ်လဲ အကုန်ပြန်ရတယ်.. Free vacation ပဲ.. ခစ်ခစ် ??? ” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားလည်းဖူးရင်း လိပ်ဥလည်းတူးရင်းဆိုသလိုပါပဲ ပျော်စရာအတွက်သွားရင်း ပျော်စရာလေးတွေ ထပ်ကြုံတာမို့ Candy အတွက်လည်း မကြာခင်မှာပျော်စရာလေးတွေ ဖြစ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါ တယ်။
ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ မိုင်ယာမီကမ်းခြေမှာ ချစ်ရတဲ့ သူငယ် ချင်းနဲ့အတူတူ ပျော်ပျော်ကြီး အောင်ပွဲခံတော့မယ် အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်ကြီးက မျှော်လင့်နေကြပါပြီ။ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ဘဝမှာလည်း ဒီလိုပဲအမြဲတမ်း အပျော်လေးတွေနဲ့ကြုံ တွေ့ရပါစေ ဥက္ကာရေ။
သူမရဲ့ ခိုင်မီးအိမ် စာကြည့်တိုက်လေးအတွက် လာရောက်လှူဒါန်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ သွားရောက်ဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ